Izizathu ezi-5 zokuthenga i-Oukitel K9 | I-Androidsis
Inkampani yaseAsia iOukitel ibisungula iiterminal nge Ixabiso elikhulu ngexabiso kwaye ingena kakhulu kwiipokotho. Isiphelo sokugqibela esivezwe ngokusemthethweni kwaye ngoku sinokuthenga yi-Oukitel K9.
I-Oukitel K9, esele sithethe ngayo kumanqaku angaphambili, sisiphelo esifikelela kwifayile ye- I-7,12 intshi enemiphetho emxinwa kakhulu kwaye ikwasinika ibhetri enkulu njengenye yezona zinto zinomtsalane, kodwa ayisiyiyo yodwa. Ukuba unamathandabuzo malunga nokuba i-Oukitel K9 sisiphelo osikhangelayo, siza kukusombulula.
1 Isikrini se-intshi ezingama-7,12
2 6.000 mAh ibhetri
3 Inkqubo elandelayo yeMediaTek processor
4 Ikhamera emibini yangasemva enefleshi ezimbini
5 Iyahambelana nazo zonke iinethiwekhi emhlabeni
6 Uyithenga phi i-Oukitel K9
Isikrini se-intshi ezingama-7,12
Isikrini se-Oukitel K9 sifikelela kwi-intshi ye-7,12 nge-FullHD + isisombululo, oko kukuthi i-2.244 x 1.080. Isikrini seLCD, esikhuselwe yitekhnoloji yeglasi yeAsahi, Yandiswa ukusuka kumda ukuya emphethweni wesiphelo isinika imvakalelo yokuntywiliselwa phezulu.
Ngaphezulu, sifumana ikhamera yangaphambili, ezimile okwe-drop engaqapheleki kwaphela, ngelixa emazantsi, kukho isakhelo esincinci esithe kratya. Ngaphandle kwento yokuba ubungakanani besikrini buziva bukhulu, ukuba siyithenga ngeemodeli zangaphambili ze-5,5 okanye ii-intshi ezi-6, umahluko kubukhulu awuninzi kangako, kuba izakhelo zincitshisiwe zangabonakaliswa.
Ngaphandle kwento itekhnoloji eqhubele phambili kule minyaka idlulileyo ngokwendlela yokusebenza kunye nescreen, Iibhetri iseyi-Achilles isithende yetekhnoloji yeselfowuni. Ngelixa kuyinyani ukuba iiprosesa zangoku zisebenzisa ibhetri encinci kunakwiminyaka embalwa edlulileyo, oku kuhlala kunesikhundla esifanelekileyo sokuhlala usuku, ngentlahla ethile.
Ukuba ufuna ukulibala malunga nokutshaja i-smartphone yakho yonke imihla, I-Oukitel K9 isinika ibhetri engama-6.000 mAh, esinokuthi sichithe kuyo iintsuku ezimbini ngaphandle kokuhlawulisa i-terminal, okoko nje siyisebenzisa kakhulu. Ukuba ukusetyenziswa kwethu kuqhelekile, sinokongeza ixesha phakathi kweentlawulo ukuya kwiveki.
Kwakhona, esi siphelo ixhasa ukutshaja ngokukhawuleza, ke sinako ukutshaja ibhetri enkulu ngeyure nje eziyi-1,5, kwaye sonwabele iiyure ezingama-600 ezisinika ukulinda, iiyure ezingama-45 zokufowuna, iiyure ezili-10 zokudlala ividiyo kunye neeyure ezingama-50 zomculo.
Inkqubo elandelayo yeMediaTek processor
Ngaphakathi kwe-Oukitel K9 fumana iprosesa Isibhozo esingundoqo seHelio P35 eyenziwe yiMediaTek. Le processor isinika isantya esifikelela kwi-2.3 GHz kwaye yakhiwe kusetyenziswa inkqubo ye-nanometer eyi-12, isinika ukusebenza ngokugqwesileyo kwezinye iiprosesa ezifanayo.
Ikhamera emibini yangasemva enefleshi ezimbini
Ikhamera yenye yezona zinto zibalulekileyo eziqwalaselwa ngabasebenzisi. Ukubheja i-Oukitel, kwakhona, kwi-sensor ye-IMX298 yekhamera njengekhamera ephambili, isivamvo esifikelela kwi-16 mpx. Njengekhamera yesibini, sifumana i-2 mpx yesibini, esinokuthi sifumane ngayo impumelelo ebonakalayo, nangona ingasebenzi imimangaliso.
Ikhamera yangaphambili isinika isisombululo se-8 mpx efanelekileyo yokwenza iifowuni zevidiyo kunye neeselfie. Abafana abavela e-Oukitel basibonisa umgangatho wekhamera Ukuthelekisa i-Honor 8X max Kwaye njengoko sibona, isinika umgangatho ongcono kunesiphelo seHuawei engalunganga.
Iyahambelana nazo zonke iinethiwekhi emhlabeni
Enye yeengxaki abajongana nazo xa bethenga itheminali kwinkampani yaseTshayina kukuba bayoyika ukuba iya kuhambelana neebhendi zomnxeba abazisebenzisayo kwilizwe labo. Kule meko, i-Oukitel K9 ixhasa amaza angama-21 ahlukeneyo, egubungela iipesenti ezingama-90 zonxibelelwano lwehlabathi.
Okwangoku, kungcono jonga kwi-specs Ukuze iminwe yethu ingabanjwa, ayizukuba kwilizwe lethu izibophelelo azihambelani ngokupheleleyo.
I-Oukitel K9 inexabiso eliqhelekileyo le- $ 249,99, elincitshiswe ngama- $ 50, ukuhlala kwi- $ 199,99 nje ukuba sisebenzisa isibonelelo esikhoyo ngoku kwi-AliExpress. Ukuba uyafuna uyazi Iinkcukacha ezithe kratya ze-Oukitel K9, ungamisa nge Iwebhusayithi yeOukitel.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » IsiTshayina Android » Izizathu ezi-5 zokuthenga i-Oukitel K9